အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထော… – PVTV Myanmar
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထော…
·6months ago ·28 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဆာဆာက ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါဘေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်ဘေးကို အံတုရင်ဆိုင်နေကြရသော ပြည်သူလူထုသို့ ပြောကြားချက်ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 20K Share – 2196
Triple Kay says:
2021-07-14 at 7:13 PM
Dr.Sa Sa က်န္းမာပါေစ
နွေ ဦး မိုး says:
Win Moeaye says:
2021-07-14 at 7:17 PM
Dr.Sa Sa ​ကျေးဇူးပါ။
Nyanlin Htet says:
2021-07-14 at 7:24 PM
ကျွန်နော်တို့ပြည်သူတေ ကNUG အစိုးရ က ပြည်သူအပေါ် စေတနာ မတ္တာ အပြည့်နဲ့ ကြိုးစားပေးနေတယ် ဆိုတာ ကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါတယ် ဆရာတို့ လဲ ဘေးအန္တရယ်ကင်းပါစေ
K Thi Aye says:
2021-07-14 at 7:26 PM
Ezio John says:
2021-07-14 at 7:33 PM
Dr ရဲ့ နိုင်ငံအပေါ်ထားတဲ့ စေတနာနဲ့မေတ္တာကိုနားလည်ပါတယ်။ အခုလိုခက်ခဲ​တွေ အများကြီးကြားကနေ ကူညီပေးမှာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကျန်းမာကြပါစေ🙏။ဟိုမအေးလိုးနဲ့အပေါင်းပါတွေတော့ သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံရှိပါစေ🙏။ဝဋ်ဆိုတာ နောင်ဘဝမကူးဘူး မအေလိုးများ သတိကြီးကြီးထားနေ👉။
2021-07-14 at 7:37 PM
ကျေးဇူးပါ Dr Sa Sa
2021-07-14 at 7:49 PM
ဆေးဆိုင် တွေ့ ပိတ် ခိုင်း နေ ပါ ပြီး။ ပြည်သူ ကို အနုနည်း နဲ့ လုပ် နေ ပါပြီး။
Avogadro Avogadro says:
ကိုယ့်တွေရဲ့လူကြီးအားလုံးကျန်းမာဘေးကင်းပါစေ ..တချို့ စုန်းပြူးတွေဝင်ဝင်ပြောတာ အရေးမစိုက်ပါနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ရေ .. ပြည်သူများလည်းအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကာကွယ်ကြပါမယ် 🙏🏻🙏🏻🌹🌹
Koqsán Dungwi says:
2021-07-14 at 7:51 PM
ခက်ခဲတဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ခုတော့ မဟုတ်ပေမယ့် အဖြေမထွက်အောင် သေနတ်နဲ့ တားနေလို့ ခက်တာပါ။ မြန်မာပြည် ဒီအမင်္ဂလာ အမြန်ကြေပါစေ။
Ma Ma Aye says:
2021-07-14 at 7:56 PM
Sin Phyu says:
2021-07-14 at 8:04 PM
ပထမကြိမ် ဒုတိယ အကြိမ်တွေမှာ အမေသင်ပေးထားတာတေ ရှိပါတယ်ဆရာ ၃ကြိမ်မြောက်ဆိုတော့ အစဥ်ပြေအောင်နေ နေပါတယ် အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပါစေ
Tinphe Kayan says:
2021-07-14 at 8:16 PM
Dr. Sa Sa, go on with your best plan for the lives of Myanmar people and may God help you in all you endeavours!
DawTin Tin Thaw says:
2021-07-14 at 8:23 PM
Ayemin Lay says:
2021-07-14 at 8:24 PM
ပြည်သူတွေ ကိုရိုနာကို အာရုံသွင်းနေပါပြီ တခါမှ မဖြစ်ဘူးတဲ့ ရွာ မှာ လူလေးဆယ် တွေ့တာဟာ စင်းစားလို့ကိုမရဘူး
Ko Phyo says:
2021-07-14 at 8:42 PM
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် PDF. ညီတွေတွေဆီကို ကာကွယ်ဆေးတွေ အရင် ပို့ပေးလိုက်ပါဗျာ သူတို့ ကျန်းမာရေးကောင်းမှ ပြည်သူတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိမှာမို့ပါ အားလုံးကို လေးစားလျက်ပါဗျာ
Moe Moe Aye says:
2021-07-14 at 8:59 PM
2021-07-14 at 9:01 PM
Dr.Sa Sa က်န္းမာပါေစရွင့္
Dawkhay MaYee says:
2021-07-14 at 9:10 PM
Drရေ ပြည်သူတွေအရမ်းအရမ်းကို အံအခမ်းညီကြတာ သေနေသိခြားက အံမခန်း ညီညာစွာ စီလုံးကြသည်
May Born Six Six says:
2021-07-14 at 9:35 PM
Dr Sa Sa လဲ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ပါ sa sa ကိုယုံကြည်ပါတယ်
Phyo Phyo says:
2021-07-14 at 10:27 PM
Khun Naung says:
2021-07-14 at 10:57 PM
Thank you so much Dr. I wish to be you healthing.
2021-07-15 at 5:19 AM
ခွေးမသား မိအောင်လိူင်ကိုဗစ်နဲ့မြန်မြန်သေပါစေ အမေသား အမေ့သမီးတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေ ကိုဗစ်ကပ်ကြီးမြန်မြန်ကင်းပါစေ အာဏာရှင်ကို​ ​လဲအ မြန်ဆုံးတွန်းလှန်နိုင်ကြပါစေ🙏🙏🙏
Nan Seng Nyo says:
2021-07-15 at 7:18 AM
Kornelias HR says:
2021-07-15 at 10:27 AM
Dr ကိုလည်း ဘုရားရှင် ကွယ်ကာပါစေ
2021-07-15 at 11:10 AM
2021-07-15 at 12:05 PM
စိတ္ထားေကါင္း၍ စိတ္ေကါင္းထားသူ ေဒါက္တာဆာဆာ။ေလးစားလ်က္ပါ။
Mg Nyunt says:
2021-07-16 at 11:05 PM
သူတို့ဆီက အာဏာ ပြန်ရရင် ကိုးဗစ် က အလိုလိုထွက်သွားဖို့လမ်းရှိမှာပါ ဆရာ
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်န…